खुशी #tweetsgiving र #indytweetsgiving | Martech Zone
खुशी #tweetsgiving र #indytweetsgiving
मंगलवार, नोभेम्बर 24, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
म पछिल्लो वर्ष मा फर्केर हेर्दा, यो आश्चर्यजनक को छोटो छैन। थँक्सगिभिंग वास्तवमै भगवानलाई धन्यवाद नदिई कुनै छुट्टीको कुरा होइन ... धन्यवाद भगवान! तपाईंले यस वर्ष मलाई र मेरो परिवारलाई साँच्चिकै आशिष्‌ दिनुभयो। मेरो छोरा र छोरी मेरो जीवनमा सब भन्दा राम्रो उपहार हो। म सधैं संसारमा सबै भन्दा राम्रो बुबा हुँ - कहिलेकाँही व्यापारको कारण अवसरहरू हराउँदछु - तर यसले मलाई कस्तो महसुस गर्छ भन्नेबाट टाढा लिन सक्दैन। यदि मैले यो भोली सबै गुमाएँ भने, मेरा बच्चाहरूले अझै पनि मेरो अनुहारमा हाँसो राख्नेछन्।
मैले यस बर्षलाई धन्यवाद दिन मानिस र व्यवसायको सूची लेख्न सुरू गरें र यसले ईमानदारीसाथ हेकलाई मेरो भित्रबाट डरायो ... करीव 50० पछि, मैले पसीना गर्न थाले कि म कसैलाई बिर्सन्छु! त्यहाँ साथीहरूको एक कोर समूह छन् जुन मसँग काम गर्छु जुन मैले उल्लेख गर्नुपर्दछ, सहित एडम सानोबाट योजक मोबाइल, मार्क Ballard को बार्क मल्लार्ड र जेसन कारबाट बीन कप। मैले यी केटाहरूका साथ गत केही महिनाहरूमा हरेक दिन काम गरें र तिनीहरूले मलाई हर्ष गरे, मलाई कडा समय दिए, र ठूलो र अझ राम्रो गर्न मलाई प्रोत्साहित गरे। आफैंलाई राम्रो मान्छेले घेरेको र तपाईं सधैं सफल हुनुहुनेछ।
पुनश्च: मार्क धन्यवाद दिए पछि स्यान डिएगो मा फर्कदै छ। मार्क छुटेको छ र म दु: खी छ कि हामी यहाँ उनको व्यवसाय प्राप्त गर्न सकेनौं र यहाँ इन्डियानापोलिसमा सफल हुन सकेन ... यो धेरैका लागि कठिन वर्ष भएको छ।
जहिले जहिले, एक ब्लग माध्यमिक धेरै हुँदैन जबसम्म मानिसहरूले सुन्न र भाग लिदैन। म निरन्तर बढ्दो पाठकहरूको लागि आभारी छु Martech Zone र नयाँ ब्लगरहरूको लागि जसले यहाँ केहि क्वालिटी पोष्टहरू र बिभिन्न आवाज प्रदान गरेका छन्।
म यो पोस्ट क्रिस बगगट र धन्यवाद बिना गर्न सक्दिन कम्पेन्डियम। उनीहरूले प्रदान गरेको समर्थन बिना म यो व्यापार सुरू गर्न सक्दिन। काइली लेसीलाई विलेलाई परिचय दिनका लागि धन्यबाद जुन पछि मैले लेखिरहेको पुस्तकमा परिणत भएको छ। र, अवश्य पनि, धन्यवाद चान्तेले फ्लानेरी मलाई पुस्तक लेख्न सहयोग गर्नका लागि!
धन्यवाद रायन कोक्स जसले #tweetsgiving को लागी पैसा जुटाउन मान्छेहरु लाई यो विचार राख्नुहुन्छ। TweetGiving एक वैश्विक उत्सव हो जुन आभारीताको शक्ति मार्फत विश्व परिवर्तन गर्न खोज्छ।
नोभेम्बर २?? २,, २००,, युएस गैर नाफामुखी महाकाव्य परिवर्तन द्वारा बनाईएको 24 26 घण्टाको कार्यक्रमले सहभागीहरूलाई अनलाइन उपकरणहरू र प्रत्यक्ष घटनाहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूको धन्यवाद व्यक्त गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। पाहुनाहरुलाई आम ब्यक्ति प्रदान गर्न आमन्त्रित गरिने छ संसारमा भएका घटनाहरुमा मानिसहरुको सम्मान मा र चीजहरु लाई तिनीहरु कृतज्ञ बनाउन।
तपाईं मध्ये इंडियानापोलिस को लागी, रोक्नुहोस् स्कूटीको ब्रीहाउस आज राती डाउनटाउन इंडियानापोलिसमा जहाँ केहि पैसा उठ्ने क्रममा छ।
तपाईंको अनलाइन मार्केटिंग सन्दर्भ जाँच गर्दै
क्राउडसोर्सिंग डिजाइनd99 डिजाइनका साथ
रायन एल। कोक्स
नोभेम्बर २०, २००। 24::2009 अपराह्न
डग सहभागीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद! तपाईंले भने जस्तै, सबैभन्दा पहिले र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं। तर महत्त्वपूर्ण कुरा, दुबै परमेश्वरमाथिको हाम्रो विश्वासको फल र कडा परिश्रमले हामीलाई निरन्तर प्रमाणित गर्दछ कि हामी किन धन्यका छौं र धन्यवादी हुनुपर्दछ! म तपाईंको मित्रता, समर्थन र थप समर्थनलाई #indytweetup #indytweetsgiving #tweetsgiving को साथ धन्यवाद दिन्छु! तपाईं केटा बीच एक मानिस हुनुहुन्छ, र म धेरै सराहनाकारी हुँ!
खैर डग्लस, र यस वर्ष तपाईलाई उत्कृष्ट सामग्री र विचारहरूको साथ धेरै टेबलमा ल्याउनु भएकोमा धन्यवाद।
नोभेम्बर,, २०१ at 25::2009 बिहान
म यस बर्षको #tweetsgiving अभियानमा एक साथी ब्लगर हुँ। मैले तपाईंको पोस्टमा रमाईलो गरें, विशेष गरी तपाईंको फोटो तपाईंको बच्चाहरूको साथ। यस्तो देखिन्छ कि उनीहरू आफ्ना बुवालाई गर्व गर्छन्। आशा छ तपाईंसँग अद्भुत धन्यवाद छ!
नोभेम्बर २०, २००। 25::2009 अपराह्न
नमस्ते डग! पोष्टका लागि धन्यबाद। मार्केटिंग टेक्नोलोजी ब्लाग लेखकहरू मध्ये एक बन्ने अवसरका लागि धन्यबाद र तपाईंको सबै दया र उदारताको लागि।